पोखरा विमानस्थलमा बुधबार साँझ जहाज दुर्घटना गराइँदै ! – हिमाली आवाज
पोखरा विमानस्थलमा बुधबार साँझ जहाज दुर्घटना गराइँदै !
हिमाली आवाज	 २०७७ चैत्र ४ गते ,बुधबार १३:१९ मा प्रकाशित
हिमाली आवाज । पोखरा विमानस्थलमा आज बेलुकी हवाईजहाजको आपतकालिन उद्घार अभ्यास गरिदै छ ।
जस अनुसार बेलुकी चार बजेपछि पोखरा विमानस्थलमा नमूनाको रुपमा जहाज दुर्घटना गराइदैछ । त्यसपछि उक्त जहाजमा आगलागी हुनेछ । आगो निभाउनका लागि दमकलको सहारा लिइदैछ ।त्यस्तै घाइतेको उपचारका लागि एम्बुलेन्स पनि गुड्नेछन् ।यि सवै घटना नमुनाको रुपमा हुनेछन् ।
अभ्यासका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसका पदाधिकारीहरु लगायत खटिदै छन् ।जसको पुर्व तयारी अन्र्तगत सोमवार र मंगलवार सामान्य अभ्यास समेत भइसकेको छ।करिव आधा घण्टादेखि १ घण्टाको बीचमा अभ्यास सकिने मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उद्घार अभ्याससँगै चार दिने विपद् उद्घारकर्मीको क्षमता विकास तालिमको समापन गरिदैछ । मन्त्रालयले आपतकालीन उद्घारलाई भविष्यमा संचालन हुने पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सहयोगी हुने अपेक्षाका साथ पनि हेरेको उपसचिव काशीराम गैरेले बताउनुभयो ।